ကား, Off-road Vehicle / SUV ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Audi BMW Dodge Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Jaguar Jeep Kia Land Rover Lexus Lincoln Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Suzuki Toyota
Off-Road Vehicle / Suv (903)
Root Category (860)
A/C: Rear (69)
Cassette Radio (154)
Blue Mitsubishi RVR 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Toyota4runner 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push S...
brown Audi Q7 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေ...
Pearl white Lexus RX 350 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pus...
Black Lexus RX 350 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...
Pearl white Lexus LX 570 2018 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pus...
Black Mitsubishi Pajero 1995 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Jaguar F-pace 2017 ( USD 130,000 )
F- PACE ,2.0L i4D , Prestige $130,000ENGINEPropellant Diesel Type ...
Black Toyota Vanguard 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေး...
Pearl white Toyota Vanguard 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...
Mitsubishi RVR G Grade 2010
Black Mitsubishi RVR G Grade 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...
Lks 520 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Kluger 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Mitsubishi RVR G Grade 2011
Grey Mitsubishi RVR G Grade 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...
Lexus NX 200t Turbo 2018
Black Lexus NX 200t Turbo 2018 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...
မြန်မာပြည်ကို အက်စ်ယူဗီ ကားမျိုးစုံ ရောက်ရှိ ပါတယ်။ အများစု ရောက်ရှိတဲ့ ကားများက ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ထုတ်ထဲမှာတောင် တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဝင်ခဲတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ယခု ကာလ ဝင်တဲ့ အမှတ်တံဆိတ်တောင် အရေအတွက်ချင်း မတူတော့ ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဂျပန် တင်မကတော့ပဲ ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်က အက်စ်ယူဗီများကို ပိုမို စိတ်ဝင်စား တင်သွင်းလာတာကို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၄ မတိုင်ခင်အထိ လူကြိုက်များပြီး အများဆုံး ဝင်တဲ့ အက်စ်ယူဗီ ကားများ ကတော့ Toyota နဲ့ မစ်ဆူဘီရှီပါဂျဲရိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင်လဲဆိုရင် သိန်း ၅ထောင်အထိ ပေးဝယ်ရတောင် ဝန်မလေးတဲ့အထိ လူကြိုက်များခဲ့ ပါတယ်။ အကြောင်းက တစ်ချိန်တုန်းက မြန်မာပြည်ကို ကားအဝင်နည်းခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အက်စ်ယူဗီထဲမှာဆိုရင် ရွေးစရာဆိုလို့ မစ်ဆူဘီရှီ ပါဂျဲရိုးပဲ ရှိတဲ့အထိ ကျဉ်းမြောင်း ခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မော်ဒယ် ဆိုရင်ကို အတော်လေးကို မော်ဒယ်မြင့်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်က ၁၉၉၅ နောင်းပိုင်း ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတကယ်သန့်ရင် သိန်း ၅ထောင်လည်း ပေါက်ဈေးရှိနိုင်ပြီး အတော်လေး ဆုပ်နေရင်တော့ မြန်မာခေါ် သားနပ်ခါး ပြန်လူးပြီး ရောင်းရင် သိန်း ၁ ထောင်ကျော်ကတော့ အသာလေးရ ခဲ့တဲ့ ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ လောက် ကားပါမစ်တွေကို အစိုးရ က တရားဝင်ဖွင်ပေးလိုက်တာနဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ ပါဂျဲရိုး ကားများ ဈေး တစ်ဟုန်ထိုးကျဆင်းခဲ့ ပါတယ်။ သူကျဆင်းတာနဲ့အတူ တိုယိုတာ ဆာ့ဖ် ပါဆို၊ လန်ခရူဆာ ကားများလည်း ဈေးသိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့ ပါတယ်။
ယနေ့တော့ အက်စ်ယူဗီ ကားတစ်စီးပိုင်ဖုိ့အတွက် သိန်း ၂၀၀ ရှိရင်လည်း မျော်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သိန်း ၃၀၀၊ ၄၀၀ လောက်ဆို အတော်လေး သန့်တဲ့ အက်စ်ယူဗီ ရနေပါပြီ။ သိန်း တစ်ထောင်ကျော် နှစ်ထောင်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ လူကြိုက်များ အက်စ်ယူဗီ ကားသစ်များကို ဝယ်ယူ နိုင်တဲ့အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လက်ရှိအခြေ အနေမှာ မြန်မာပြည်က ကားဝယ်သူများဟာ ဂျပန်ကားထက် ဥရောပကားများအပေါ် မျက်စိကျတာလည်း မမှား ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဒါကိုလည်း ပုံသေပြောလို့မရနိုင်ပါ။ ဂျပန်ထဲမှာ လက်ဆက် အက်စ်ယူဗီ ကားများကိုလည်း အင်မတန်လူကြိုက်များကြ ပါတယ်။ အက်စ်ယူဗီဆိုတာ ဆီအတော်လေးစားတဲ့ ကားများပါ။ အကြောင်းက အင်ဂျင်ကြီးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုး အက်စ်ယူဗီ မဟုတ်ပဲ ဇိမ်ခံအက်စ်ယူဗီဆိုရင် ဆီပိုစားပြီး အခြားသော ကုန်ကျစရိတ် များစွာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ခရီးဝေးသွားလေ့သွားထ ရှိသူ အများစုက အက်စ်ယူဗီကို ပိုဝယ်ကြပါတယ်။ မြို့ တွင်းမှာပဲ သုံးဖို့ ရည်ရွယ်သူများကလည်း အက်စ်ယူဗီကို ဝယ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်ဇိမ်ခံဗားရှင်းကို ပိုအသားပေး ဝယ်ယူ ကြ ပါတယ်။ ဒီတော့ လက်တလော မြန်မာပြည်မှာ အရေအတွက် အများဆုံး မြင်ရတဲ့ အက်စ်ယူဗီကို ပြောပါဆိုရင် မစ်ဆူဘီရှီ ပါဂျဲရိုး၊ တိုယိုတာ ပရာဒို၊ ဆာ့ဖ်၊ လန်ခရုဆာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မှာဆိုရင် လန်းရိုဗာ အင်္ဂလန် အက်စ်ယူဗီ ကားတွေကိုလည်း အရေအတွက် အမြောက်အများ မြင်တွေ့ နေရ ပါပြီ။ ပြီးတော့ တောင်ကိုရီးယား အက်စ်ယူဗီ ဖြစ်တဲ့ ကီရာ အမှတ်တံဆိပ် များကိုလည်း အရေအတွက် အမြောက်အများနဲ့ မြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းက ကီရာဟာ ပြည်တွင်းက ကုမ္မဏီတစ်ခုနဲ့ ပူးပေါင်းလို့ တရားဝင် တင်သွင်း ဖြန့်ချိရောင်းချလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း သိန်း ၁ထောင်အောက်မှာပါပဲ။ မာစီဒီး အက်စ်ကလက်စ် ကားများလည်း ရောက်ပါတယ်။ အက်စ်ယူဗီ ကား ဖြစ်ပြီး သူတို့ကျတော့ သိန်း ၂ ထောင်ကျော် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ရောက်တဲ့ အက်စ်ယူဗီများက ဂျပန်လေလံက ရောက်တာနဲ့ ကုမ္မဏီများမှ တိုက်ရိုက် သွင်းတဲ့ အသစ်များနဲ့ ကွဲပြားနေပါသေးတယ်။ ဂျပန်လေလံကနေဆိုရင်တော့ ဝယ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု မရှိတော့ ပါဘူး။ အသစ် ဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်ဆင်မှုအပြင် အခြားသော အာမခံများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ပတ်ရစ် ကားများက ဈေးပိုသက်သာနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် အမှတ်တံဆိပ် အက်စ်ယူဗီ ကားများလည်း မြန်မာပြည်ကို ဝင်လာနေတော့ အဟောင်းကားထက် အသစ်ကားများ အပေါ် ပိုမို လူကြိုက် ဝယ်ယူလာကြတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ Motors.com.mm ဝဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာ အက်စ်ယူဗီ ကား အဟောင်းကော၊ အသစ် ကော စုံစုံလင်လင် တင်ပြပေးထားတာမို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။